बजेटमा राखिएको कार्यक्रम गफमै सिमित ! « Drishti News – Nepalese News Portal
बजेटमा राखिएको कार्यक्रम गफमै सिमित !
काठमाडौं । रकारले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने भनी यस अघिका २ आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको एक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
पहिला अनुदानमा आधारित यो कार्यक्रम लागू गर्ने बताएपछि अनुदानका लागि करीब ७०० ले आवेदन दिए । तर, त्यसपछिको बजेटमा २ प्रतिशत ऋणको मोडालिटीमा कार्यविधि आयो । पुराना आवेदनबारे अझैसम्म निर्क्योल हुन सकेको छैन ।, यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।